‘मंसिर ४’ मा नभए नेपालमा चुनाव नै हुँदैन :: झलनाथ खनाल – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०७:१९ English
‘मंसिर ४’ मा नभए नेपालमा चुनाव नै हुँदैन :: झलनाथ खनाल
० मंसिर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचन होला ?
– मंसिर ४ मा संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ । त्यसका लागि हामीले ब्यापक तयारी गरिरहेका छौँ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै तिरबाट निर्वाचनलाई समर्थन प्राप्त छ । नेपालका मेजर पार्टीहरु निर्वाचनको पक्षमा छन् । अरु अधिकांश पार्टीहरु पनि अहिलेसम्म निर्वाचकै पक्षमा देखिएका छन् । नेकपा–माओवादीले के गर्ने हो भन्ने प्रश्न छ । उहाँहरुले पनि मंसिर ४ को निर्वाचनमा भाग लिएर कमरेड पुष्पलालले देखाएको बाटोबाट अघि बढ्नु पर्छ ।
० चुनावको मुखमा तपाईको पार्टीमा पनि आन्तरिक रुपमा विवाद छ नि ?
– हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको २२ बैठक सम्पन्न भएको छ । त्यसले राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । अहिलेको बर्तमान परिस्थिति र हाम्रो पार्टीको कार्यनीति के भन्ने कुरा स्पष्ट बनाईएको छ । देश भरीको परिस्थिति मुल्याङकन गरेका छौँँ । सबै विवादहरु मिलाएका छौँ। द्धन्द्ध भए पनि त्यो स्थगित भएर हामी एक भएर निर्वाचनमा होमिन्छौँ । अब नेकपा एमाले सबै भन्दा बढी निर्वाचनमा केन्द्रीत भएको छ र देशै भरी अग्रस्थानमा पनि रहेको छ । यसलाई कायम राख्दै निर्वाचनबाट हामी पहिलो पार्टी भएर आउँछौँ।
० राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको बैठक नबोलाएकोमा पार्टीमा असन्तुष्टि छ नि ?
– राष्ट्रीय प्रतिनिधि परिषदको बैठकमा हामी आवश्यकता अनुसार बोलाउँछौँ। अझै त्यो भन्दा बृहद राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाउने तयारीमा छौँ हामी । राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको बैठक भन्दा पहिला अर्को ठूलो बैठकको आवश्यकता परेकोले त्यसलाई स्थगित गरेको हौ ।
० तपाई कमजोर भएर फेस गर्न नसकेको कारण बैठक नबोलाएको रे नि ?
– बैठक हामी निरन्तर गरिरहेका छौँ । हामी निरन्तर तिखारिँदै गईरहेका छौँ । यसले पार्टीको एकतालाई अझै बलियो बनाएको छ । आठौँ महाधिवेशनमा एमालेमा १ लाख ३८ हजार कार्यकर्ता थिए भने अहिले ३ लाख कार्यकर्ता पुगेका छन् ।
० पार्टीभित्र तपाईं, माधव नेपाल र केपी ओलीको मन मिलेको छ ?
– अहिले हामी सबै नेताहरुको मन मिलेको छ । हामी एक मन एक चित्त भएर एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउन लागेका छौँ । हामी ब्यवहारमा एक छौँ ।
० अग्रस्थानमा एमाले रहेको आधार के ?
– हाम्रो पार्टीको लोकप्रियता, सहि सिद्धान्त, कार्यदिशा, नीतिहरु, राष्ट्रियताको पक्षमा हाम्रो निरन्तरको अडान, लोकतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा हामीले उठाईरहेको आवाजहरु र हामीले गर्दै आएको संघर्ष पुर्ण परम्परा र अहिले नेपाली समाजलाई रुपान्तरण गर्ने गरी हामीले राखेको विचारहरु, राज्यको पुनःसंरचनाको सवालमा हामीले राखेको विचारहरुनै एमालेले सबै भन्दा ठूलो पार्टी बनाउने आधार हो ।
० एमाओवादीले त तपाईहरुलाई तेस्रो चौथो पार्टी भनेको छ नि ?
– जसले हाम्रो पार्टीलाई चौथो पाचौँ र छैठौँ नम्बर दिन्छन् । उनीहरु आफै कुन नम्बरमा पुग्छन् हेर्दै जानुहोला । इतिहासको नियम कडा हुन्छ ।
० एमाले एक नम्बर भएन भने के गर्नुहुन्छ ?
– नेकपा एमाले निर्वाचनबाट एक नम्बर पार्टी हुन्छ त्यसमा केही गर्नु नगर्नु पर्ने आवश्यकतै छैन ।
० एमालेका शिर्ष नेताहरुले प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने निर्णय गर्नुभएको हो ?
– विल्कुल होइन । पार्टीको शिर्षस्थ नेतृत्वमा रहनु भएका अधिकांश नेताहरु प्रत्यक्ष तर्फबाट चुनाव उठ्नु हुन्छ । म इलाम क्षेत्र नम्बर १ बाटै उठ्छु ।
० मंसिर ४ मा निर्वाचन नै हुने अवस्था छैन कसरी एक नम्बर बन्नुहुन्छ ?
– चुनाव त हुनै पर्छ । मंसिर ४ मा चुनाव भएन भने त नेपालमा चुनावै हुँदैन ।
० नेकपा–माओवादीले चुनाव रोक्यो भने ?
– चुनाव कसैले रोकेर रोकिँदैन । निर्वाचन घोषणा भईसक्यो । अब मंसिर ४ मा संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ । त्यसले देशलाई परिणाम दिन्छ ।
० नेकपा–माओवादीले चुनाव भाड्न सक्दैन ?
– भाड्न खोजे त्यसको औषधी उपचारहरु सबै गरिन्छ ।
० कस्तो उपचार ?
– प्रशासनले उपचार गर्छ नि ।
९ श्रावण २०७०, बुधबार २३:०१ मा प्रकाशित